AmaNgqina KaYehova Kumazwe AseMerika
EMexico: Bafunda iBraille kunye
ABEMI 998 254 087
ABAVAKALISI 4 154 608
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 4 353 152
“Ndiza Kuyifunda Nawe”
UIsmael, ohlala eMexico, wagqiba ekubeni ayifunde yonke iBhayibhile. Kunyaka nje omnye wayesele eyifunde kwade kwakabini, kodwa kamva waba yimfama. Emva kweminyaka embalwa, uÁngel, oliNgqina LikaYehova, wadibana noIsmael waza wancokola naye ngezithembiso zikaThixo. UIsmael wayefuna ukwazi ngakumbi, kodwa wathi, “Andiboni; Andikwazi ukufunda iBhayibhile.”
UÁngel wathi, “Sukukhathazeka, ndiza kukufundisa iBraille.”
UIsmael wabuza, “Uyayazi iBraille?”
UÁngel wamphendula wathi, “Hayi, kodwa ndiza kuyifunda nawe.” UIsmael wayemangalisiwe yinto uÁngel awayezimisele ukumenzela yona. UÁngel wagoduka, waphanda ngendlela yokufunda iBraille, waza wenza oonobumba beBraille kwikhadibhodi. Emva koko, wafundisa uIsmael indlela yokufunda iBraille. Kungekudala, uIsmael wafunda iBraille, waya kwiintlanganiso waza wafunda neencwadi zethu zeBraille. Ngoku uÁngel unezifundo zeBhayibhile ezine zabantu abangaboniyo. Bayathanda ukuncokola ngeParadesi xa amehlo abo eza kube ebona.
UViannei, udade waseMerika oneminyaka eyi-14 wabhala wathi: “Kwiklasi yam yezifundo zentlalo, utitshala owayebambele waqalisa ukuthetha ngonqulo. Wathi masibize ezinye zeenkonzo esizaziyo, mna ndabiza amaNgqina KaYehova. Abo ndifunda nabo bandihleka besithi sibachithel’ ixesha, siswele into yokwenza, ibe bayazilahla nezo ncwadi zethu. Notitshala wayethetha kakubi ngathi.
“Ngoko ndathandaza kuYehova ndimcela ukuba andiphe amandla okushumayela. Ndabaxelela ukuba asiyi kwizindlu zabo kuba sifuna ukubachithel’ ixesha, kodwa siya kuba uYehova esithume ukuba siye kubanika amacebiso aluncedo aseBhayibhileni. Ndabacela ukuba bangazilahli iincwadi zethu kuba zinokutshintsha ubomi babo zize zibasindise. Utitshala wacela uxolo waza wathembisa ukuba xa kuphinde kwafika amaNgqina ekhayeni lakhe uza kuwavulela, awamamele, aze afunde neencwadi zawo. Zange ndimkholelwe.
“Ndambona emva kweenyanga ezine, ndothuka kukwazi ukuba uyafundelwa. Emva kwezinye iinyanga ezintandathu, wandikhangela esikolweni ukuze andibulele kuba ndaye ndamshumayeza ngala mini. Ndandingasamazi kuba wayezichebile iinwele neendevu zakhe. Ngoku ungumvakalisi ongabhaptizwanga.”
Kunyaka ophelileyo, phantse wonke ummandla waseAmazon wawusematheni ngenxa yabantu bakaYehova baseBrazil. Abaninzi apho zange bakhe bazive iindaba ezilungileyo. Licinga ngaloo nto, iQumrhu Elilawulayo laye lavuma ukuba kubekho iphulo lokushumayela lonyaka wonke ukuze kufikelelwe nabo bakwiindawo ezisemagqagaleni zaseAmazon.
EBrazil: Ukushumayela eAmazon
Iofisi yesebe yakhetha iidolophu eziyi-53 ezingaseAmazon ukuze ithumele kuzo abavakalisi boBukumkani. Kwiinyanga nje ezine, abavakalisi abangaphezu kwe-6 500 bazenza bafumaneka.
Kwidolophu ekwanti yaseAnamã, apho kwakungekho nomnye umvakalisi, abazalwana noodade abalishumi bahlala apho kangangentsuku eziyi-11, bahambisa iincwadi eziyi-12 500 baza baqalisa izifundo zeBhayibhile eziyi-200, ngoku abaziqhuba ngefowuni. Ngoxa babelapho, aba bazalwana babeye baqhube neentlanganiso. Kwiintlanganiso zokugqibela belapho, bavuyiswa kukuza kwabantu abayi-90. Useza kubonakala ngakumbi umphumo weli phulo.
Kangangeminyaka emithandathu, uJehizel noMariana babesoloko beseklasini enye kwisikolo esiseVenezuela. Ngenxa yokuba uJehizel eliNgqina, wayesisisulu sokugezelwa nguMariana. UMariana wayeqinisekile ukuba uJehizel akalwazi ulonwabo. Ngenye imini, emva kokugezelwa, waye wathi: “Mariana, uzukhe ungene kwiwebhsayithi yethu u-jw.org. Uye kwindawo ethi, ‘Iividiyo ZamaKristu,’ uze ukhethe ibhokisi ethi, ‘Abafikisayo.’”
Ngaloo mvakwemini uMariana wafowunela uJehizel wathi, “Ngoku ndiyayazi ukuba kutheni usenza ngolu hlobo.”
Exakiwe, uJehizel wabuza, “Usahlekisa ngam nangoku?”
Wathi yena, “Hayi, andisoze ndiphinde ndiyenze loo nto. Ngoncedo lwakho, ngoku ndiyazi ukuba le nto bendicinga ukuba kukonwaba yenye yezizathu zeengxaki zam ezininzi.” UMariana wafunelwa umntu wokumfundela iBhayibhile, ibe ngoku uya kuzo zonke iintlanganiso.
UGérole, owayengunobhala kwicawa yakhe eseHaiti, wachukumiseka xa amaNgqina amphendula yonke imibuzo awayenayo ngokusuka eBhayibhileni. Yena nentombi yakhe bavuma ukufundelwa iBhayibhile. Ethanda oko wayekufundiswa, wacela ukuba afundelwe kabini evekini.
Emva kweenyanga ezintathu, uGérole waya kumfundisi wecawa yakhe waza wambuza: “UYesu wamiselwa ngowuphi unyaka njengoKumkani? Amalungisa aza kuya phi xa eswelekile? Abangendawo bona? UYesu wafela emnqamlezweni okanye esibondeni?” Umfundisi wathi angandiphendula umbuzo wesibini nowesithathu. Wathi, “AmaNgqina KaYehova athi bayi-144 000 abaza kuya ezulwini. Mna ndithi bonke abenza oko kufunwa nguThixo baza kuya ezulwini. Abangendawo bona baza kutsha esihogweni.” Lanqum’ inqatha akubuzwa ukuba kundawoni eZibhalweni oko akutshoyo. UGérole waphoxeka kodwa ngoku wayefuna ngamandla ukuqhubeka efundelwa iBhayibhile. Wayishiya icawa esithi ufunde okuninzi ngeBhayibhile kwiinyanga nje ezintathu efunde namaNgqina KaYehova kunakwiminyaka eyi-30 ehamba icawa. UGérole nentombi yakhe basandul’ ukubhaptizwa, ibe sele benezifundo zeBhayibhile eziyi-23 apho bahlala khona.
EHaiti: UGérole nentombi yakhe banezifundo zeBhayibhile ezininzi